[dropcap] L [/ dropcap] vhiki yehusiku muEast Los Angeles Civic Center pakanga paine zvimiro zvakanaka zvaibuda, chikonzero chejive: vanozvipira kubva ku "Familia Unida" vakasarudza kuzvitorera ivo kubatsira vanoshandisa wiricheya kuchenesa yavo midziyo. Icho chaive chiitiko chinonakidza zvechokwadi, sezvo mariachi bhendi yakanzwika kumashure kwekunyemwerera kwese kwairatidzwa masikati iwayo.
Zviitiko zvemunharaunda zvakaita seizviwiricheya geza ”rinofanirwa kushambadzwa zvakanyanya, kuunza kutarisisa kune pfungwa yekuzvipira munharaunda, kubatsira vanhu vakaremara, neruremekedzo uye nekushingairira kwakakodzera. Hatifanire kukanganwa kuti vanhu vakaremara vanokodzera kubatsirwa nekuvaraidzwa senge munhu anotevera.
Gore rino Los Angeles chiitiko chinopa rubatsiro kune ese manyore uye wiricheya yemagetsi vashandisi, zvimwe zveizvi vanoshandisa wiricheya akagadzirisa zvakare nekushambidza vamwe vashandisi macheya, izvo zvakaita kuti Familia Unida Mutungamiri Irma Resendez ataure zvinotevera, "muenzaniso wakanaka wekuti vanhu vakaremara vane hunyanzvi hwakawanda".
Yekutanga Chinyorwa chakapihwa neEGP Nhau